Android inay Android: SMS Kala beddelashada waa sidaas Easy
Sida loo SMS ka Android wareejiyo Android
Hi oo dhan waxaan u baahan tahay caawimo / talo si ay u gudbiyaan farriimo qoraal aan ka jir ugaar HTC in aan Samsung Galaxy cusub II ama si aan pc. Hishiis badbaadiyey xiriir si aan SIM laakiin iyocadhadii arki tab ah inay tan sameeyaan leh qoraalka. Waxaan isku dayay in uu soo gal suuqa android laakiin waxaan fariin soo socda "kuma asaasi karo xidhiidh ah oo la isku halayn karo xogta si server" xitaa marka aan ku xiran WiFi guriga. Run ahaantii waxaan u baahan tahay in ay sii fariimaha kuwaas oo si gargaar / talo kasta oo aad ayay ugu qanacsan. Shifo. John.
Sida John, aad rabto in aad SMS wareejiyo ka Android oo waxaan iyaga ku badbaadin ay brand-cusub mid. Tan iyo farriimahan gaaban ayaa laga yaabaa in diiwaan xusuus muhiim ah oo cajiib badan u dhexeeya reerahoodii ahaayeen, saaxiibada, fasalka iyo naftooda. Si kastaba ha ahaatee, wareejinta SMS ka mid Android inay Android soo baxday in ay ma ahan wax sahlan.
Nasiib wanaag, hadda, wax ka beddesho. Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac kaa caawin kara inaad ka Android nuqul ka SMS oo waxaan iyaga ku badbaadin in Android kale hal click. Sida fudud oo waxtar leh qalab kala iibsiga telefoonka, waxay fududaysaa in aad kaliya ma ahan fariimaha ka android wareejiyo Android, laakiin sidoo kale u guuraan xiriirada, abuse wac, jadwalka taariikhda, photos, music, videos iyo barnaamijyadooda.
3 tallaabooyin ay ku SMS ka Android wareejiyo Android
Tallaabada 1. Daahfurka MobileTrans
Bilowga, rakibi iyo abuurtaan MobileTrans on your computer. Suuqa ayaa aasaasiga ah ka muuqan doontaa.
Tallaabada 2. Isku aad laba telefoonada Android inay PC
Markaas, xiriiriyaan laba telefoonada Android inay PC ka via fiilooyinka USB Sida ugu dhakhsaha badan telefoonada ay ku xidhan yihiin, qalab kala iibsiga taleefanka si toos ah iyaga lagu ogaan doonaa. Iyo telefoonada lagu soo bandhigi doonaa meelo ka mid ah "Source" iyo "Destination" siday u kala horreeyaan.
Waxaad sax karaa "data Clear hor nuqul" ee geeska hoose ee midig marka aad rabto in aad u faaruqiso sanduuqa smd ku saabsan telefoonka caga.
Fiiro gaar ah: Haddii aad go'aansato in aad bedesho meelaha ka mid ah laba telefoonada, guji "Flip" dhexe ee labada telefoonada.
Talaabada 3: Saxiixa SMS ka Android inay Android
Sida aad ka arki, content oo dhan ayaa loo gudbin karaa telefoonka cusub Android. Sidaas darteed, haddii aad rabto in aad keliya u dhaqaaqayo SMS, waa in aad ka saarto marks ka hor waxyaabo kale oo u dhigma.
Hadda, waxaa la gaadhay wakhtigii si ay u gudbiyaan SMS. Guji "Start Copy". Inta lagu guda jiro horumar kala iibsiga, inaad si fiican u sii lahaa laba telefoonada Android ku xiran waqtiga oo dhan. Marka suuqa kala iibsiga ay ka badan tahay, waxaad riixi kartaa "OK" si ay u soo afjaraan.
Marka laga reebo SMS wareejinta ka Android inay Android, waxa kale oo aad kartaa in lagu wareejiyo xiriirada ka Android inay macruufka . Waxa ay taageertaa in ka badan 3000 oo ay ka mid yihiin qalabka HTC, Samsung, aaladaha Apple, iyo telefoonada dheeraad ah. Sidaa darteed, runtii raali galin lahayd baahidaada kala iibsiga kala duwan.
Video ku saabsan yahay sida farriimaha si ay u gudbiyaan ka Android inay Android in tallaabooyinka.
Download MobileTrans fariimaha wareejiyo ka Android inay Android.
> Resource > Android > Sida loo SMS ka Android wareejiyo Android